WAASUGE IYO WARSAME: Socdaalkii 30ka Maalmood, waxaa qoray.Dr.Xuseen Sh.Axmed (kaddare)
Home » Qormooyinka » WAASUGE IYO WARSAME: Socdaalkii 30ka Maalmood, waxaa qoray.Dr.Xuseen Sh.Axmed (kaddare)	WAASUGE IYO WARSAME: Socdaalkii 30ka Maalmood, waxaa qoray.Dr.Xuseen Sh.Axmed (kaddare)
31/03/2017	224 Views Alle ha u naxariistee Dr.Xuseen Sheekh Axmed (Kaddare), wuxuu ka mid ahaa Qorayaashii Farta Soomaaliga. wuxuu ahaa Laashin dhaqan-ruug ah oo Suugaanta Soomaalida noocyadeeda kala geddisan curiya misana Qoraa ahaa.
Waxaa intaas dheer mar haddaan dibedda tagno wax welwel ah kama qabno xagga shaqada, maxaa yeelay, waxaan mar waliba warqado ka helnaa Maariya Aabaheed oo ah nin warshado leh, wuxuuna nagula taliyaa inaan asaga u shaqeyno”.
Markuu intaas Muuse yiri ayuu Waasuge hadalkii qaatayn kuna billaabay “Maandhow, aad ayaan hadalkaaga u gartay, haddaanse dhuuxay, waxaan u aqaatay inaa tahay nin ka fogaanaya wixii uu waalid iyo walaal lahaa. Tan labaad, Muusow, waan ka war hayaa dhallinyaradii da’daada ahayd oo aad debadda wax iskula soo barateen, si farxad iyo kalsooni leh ayey dalkooda uga shaqeystaan, waalidkoodna uga warhayaan ugana ducaystaan, (wuxuu Waasuge soo hadal qaaday Wiil uu aabbihiis yiqiin, Muusena ay wax isla soo barteen). Muuse ayaa hadalkii duqa u adkeysan waayey, markaasuu si caro ku jirto uga dhex galay, yiri, “Aabbe marna haka baqin inaad dhibaato la kulantid anigoo nool. Waxaan kaa ballan qaadayaa inaan bil walba lacag kuusoo diro, haddaad jirro yar isku aragtidna waxaan kugu daweynayaa dibedda inta tikid kuusoo diro”. Intaa uu Muuse faanka qubayo, Waasuge feeraha ayuu ka qoslayaa, maxaa yeelay, wiilkiisa ayaa u miisaaman, wuuna ka rajo gaabanyahay. Muuse oo wali hadalkii shubaya ayuu Waasuge hadalkii ka qaatay oo wiilkiisii u jeediyey hadal isugu jira waano iyo canaan intaba. ugu dambeyntiina wuxuu Waasuge hadalkiisii la kaashaday murtida soomaalida gabaygii Xaaji Aadan Afqalooc oo ahaa:
Seben tegay mid wali soo socdiyo, saaka waxa jooga Saddexdaa waqti baa xaal adduun, lagu sifeeyaaye
Soo noqod ma jiro shalay wixii, saadufoo dhacaye
Waxa saadambeetiyo berrina, waa su’aal maqane
Waxay taladu kuu suubbantahay, subaxaad joogtaaye.
Markuu wadahadalkii heerkaas gaaray ayuu Muuse iska dhigay nin waanadii qaatay, Waasugena wuu ku farxay, ikastoo uu shaki weyn ka qabay.
Waasuge afar faataxo ayuu Muuse u maray, wuxuuna ugu duceeyey inuu dalkiisa ka shaqeysto, dadkiisana la noolaado, waalidkiisna ka duceysto. Sidaas ayaana hadalkoodii subaxaas ku dhamaaday. La soco Qeybta 14-aad, Berri haddii Alle idmo.
Previous: Tilmaamaha ay gabdhuhu ku raacaan wiilasha
Next: DHEGEYSO: Maamulka Hirshabeelle oo dhisaya dekedda Ceelmacaan